Sida Loogu Adeegsado Xirfadaada Si Aad Ugu Hormarto Isbedelka Bulshada - Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada
(Waxaa daabacay: Forbes.com, Julaay 2, 2020)
Waxaa qoray David J. Smith
Kordhin, ardayda iyo macaamiisha ayaa i weydiinaya sida ay ugu dabaqi karaan qiimayaashooda shaqsi meherad macno samaynaysa iyo horumarka bulshada, laakiin sidoo kale waxay siisaa nabadgelyo, dakhli xasiloon iyo mustaqbal wanaagsan.
Caqabado tiro badan oo soo food saaray bulshada Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah, kuwa dareemaya jiidashada inay gacan ka geystaan ​​hagaajinta xaaladaha bulshada iyo siyaasadeed waxay raadinayaan siyaabo ay uga ciyaaraan door wax dhisaya. Qaar badan, tani waxay ku lug yeelan kartaa jarista waqti ka dib shaqada si ay gacan u siiso, ha noqoto wajiga wajiga lagu daboolo guriga ama ka qaybgalka isu soo baxa ama mudaaharaadka. Qaadashada sabab waa go'aan shakhsiyeed oo aad u sarreeya. Waxay kuxirantahay qofka qiyamkiisa shaqsiyeed, hibadiisa, kartidiisa, waqtigiisa iyo tamartiisa. Isku soo wada duubida baahida bulshada iyo fursada shaqsiyeed waxay noo ogolaan kartaa inaan sameyno wax micno noo keenaya nolosheena iyo "inaan socodno hadalkayaga," si loo yiraahdo.
Xaaladaha shaqsiyeed waa kuwa ugu saameynta badan go'aan ka gaarista shaqo, gig, ama xirfad shaqo. Badanaa, ma lihin raaxada aan ku dooran karno oo aan ku dooran karno waxa aan qabanno: kirada ama bixinta baabuurka ayaa la rabaa; amaahda kulliyadda waa in la bixiyaa, cuntada waa in miiska la saaraa. Ma yareyn karno xaqiiqda jirta in shaqada mushaharka lihi ay sii nooleyso nolosheena iyo qoysaskeenna.
Laakiin waxaa muhiim ah in la aqoonsado in baahida loo qabo in isbeddel bulsheed lagu sameeyo iyo baahida shaqada loo baahan yahay in aan la is dhaafsan. Iyadoo aan loo eegin shaqada aan qabanayno, waxaan ku sameyn karnaa hab la jaan qaadaya qiimaheena iyo horumarka sababaha aan u heellan nahay. Shaqo kasta iyo xirfad kasta, waxaa jira meel bannaan oo lagu sameeyo waxa saxda ah, inta badanna la qaado tallaabooyin yar yar oo macno leh oo lagu horumarinayo nolosha qof kale. Mararka qaarkood waxay ku saabsan tahay sida aan ugu soconno waxa aan sameyno. Haddii aan nahay deeqsi, naxariis, cadaalad iyo daacadnimo ku wajahan qaabkeena, waxaan ka dhigeynaa adduunka meel wanaagsan.
Kuwa doonaya inay sii fogaadaan oo ay isku daraan qiyamkooda bulsheed iyo shaqadooda sabab gaar ah ama dadaal, waxaan kaa codsan lahaa inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda:
Fiiri ardaaga dambe marka hore.
Filimka The Wizard of Oz, Dorothy wuxuu ka turjumayaa, "Haddaan mar kale raadsado rabitaanka qalbigeyga markale, kama eegi doono meel ka baxsan daaraddayda." Haddii ay tahay rabitaanka qalbigaagu inuu beddelo adduunka, waxaad ka bilaabi kartaa bulshadaada. Badanaa "dhibaatooyinka waaweyn" ee adduunka soo foodsaarayaa waxay helaan feejignaanteenna iyo xiisahayaga. Tani waxay u horseedi kartaa jahwareer: Haddii aan doonayo inaan cirib-tiro faqriga adduunka soo koraya, sideen ku billaabaa? Waan fahamsanahay tan, laakiin waxaan soo jeedin lahaa in saboolnimadu sidoo kale ay tahay arrin maxalli ah oo ay tahay wax ay bulshadaadu la kulanto Ka bilow guriga. Su’aashu markaa waxay noqoneysaa: Shaqo noocee ah oo ka dhex jirta bulshadeyda ayaa u baahan fiiro gaar ah? Miyaan u shaqeyn karaa hay'ad adeegga bulshada ah ama faa'iido-la'aan oo ka shaqeysa arrimaha saboolnimada?
Tixgeli waxaad ku qaban karto doorkaaga hadda.
Mararka qaarkood waxaa jira aaminaad qaldan oo ah in shaqooyinka kaliya ee naqshadeynta ka shaqeynaya hagaajinta dhibaatooyinka bulshada ay diiradda saaraan isbedelka bulshada. Waxaan ku doodi lahaa in inta badan qof kastaa ka heli karo boos shaqadooda si loo hormariyo himilooyinka bulshada ee muhiimka ah. Xirfadleyda tafaariiqdu waxay ku boorin karaan loo shaqeeyaha inay siiyaan alaabooyin la jaan qaadaya qiyamka deegaanka. Qof ka shaqeeya goob adeeg - timo jilista, tusaale ahaan - wuxuu ugu deeqi karaa qayb ka mid ah dakhligooda sababo gaar ah. Xisaabiyuhu wuxuu u tabaruci karaa waqti tabaruc si uu u taageero baahiyaha aan macaash doonka ahayn. Xirfadlaha IT-ga wuxuu qibradooda u siin karaa bilaash kooxaha cadaalada bulshada ee isku dayaya inay hormariyaan dib u habeynta cadaalada.
Ogow sida looga gudbo tabaruca shaqaalaha mushahar qaata.
Dhaqdhaqaaqa badankood wuxuu ku bilaabmaa iskaa wax u qabso. Kuwa abaabulaya isu soo bax ama mudaaharaad mararka qaarkood waxay iskood isugu yimaadaan si iskood ah. Laakiin badanaa, waxaa jira koox qorshayn ah oo dad ah oo maskax iyo qalbiba leh. Markay dadaalkani sii kordhayo, waxaa laga yaabaa inay jirto baahi loo qabo in dadaalka lagu sii wado shaqaalaha mushaharka qaata. Tani waxay u baahan doontaa helitaanka taageero maaliyadeed iyada oo loo marayo deeqo, lacag ururin ama deeqo. Marka maalgelin la helo, markaa shaqaale xirfadlayaal ah ayaa la qori karaa. Tabaruce ahaan, dadaalkaagu wuxuu kuu horseedi karaa shaqo mushahar leh oo kuu oggolaanaysa inaad sii wadato shaqada aad jeceshahay.
Baadhitaan, gaadho oo qorshee.
Haddii aad gaarto gabagabada in ujeeddadaadu tahay xirfad kuu oggolaanaysa inaad ku dhaqanto waxa lagugu xukumay, waxaad u baahan doontaa inaad waqti ku qaadato baaritaanka iyo qorsheynta. Dhammaan sababaha bulsheed maahan kuwo si fudud u oggolaanaya shaqo mushahar leh, laakiin qaar badan ayaa oggolaada. Waxaad ubaahantahay inaad tixgeliso kuwa taageeri kara xirfad. Dhinacyada sida u qareemida sharciga, horumarinta bulshada, isbadalka siyaasada iyo u ololeynta siyaasada, dariiqooyinka waa cad yihiin waana la qeexay. Shaqo waxay u baahan kartaa shahaado jaamacadeed oo gaar ah iyo shuruud ah in marka hore lagu tabaruco. Badanaa iyada oo loo marayo goob waxbarasho ama tababar, waxaad ku baran doontaa tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo. Tani had iyo jeer waxay ku lug leedahay la hadalka xirfadleyda hawsha qabanaysa, mararka qaarkood iyada oo la adeegsanayo wareysiyo macluumaad ah. Nidaamkan, waxaad ku heli kartaa qof kugula talin doona. Lahaanshaha qorshaha ciyaarta waa muhiim: Sameynta isku xirnaanta, tababarka ama waxbarashada, iyo khibradda iskaa wax u qabso waxay u badan tahay inay qeyb ka noqoto.
Waxaan joognaa daqiiqad bulshada dhexdeeda ah oo aan u baahanahay inaan "dhammaanteen" ka wada shaqeyno arrimaha muhiimka ah ee isbeddelka bulshada. Arrimaha la xiriira caafimaadka dadweynaha, amniga bulshada, caddaaladda bulshada, iyo sinnaanta dhaqaalaha ayaa culeys la saarayaa. U adeegso xirfaddaada sidii baabuur isbeddelka adiga muhiimka kuu ah.
Miyaynu ku dhalannay Hardwired for War?
Sarkaalka Barnaamijka: Dhallinyarada, Fursadda iyo Mawduucyada Waxbarashada ee Ford Foundation
Dhallinyarada, Fursadaha iyo Mawduucyada Barashada ee 'Ford Foundation' waxay raadinayaan Sarkaalka Barnaamijka ee fekerka leh, xiisaha leh ee ku hawlan si uu gacan uga geysto qaabeynta iyo wadidda shaqada caddaaladda bulshada ee aasaaska Mareykanka iyo adduunka [sii wad akhriska…]